Wafdigii uu hoggaaminayay Wasiirka Arrimaha Gudaha ee DKG oo la kulmay Jaaliyadda Somalida ee Maraykanka
Wafdigii uu hoggaaminayay Wasiirka Arrimaha Gudaha ee DKG,Mudane Daahir Mohamed Sheikh, ooberyahaan booqashada ku joogay dalka Mareeykanka ayaa maanta shir ku qabtayhotelka weyn ee Doubletree oo ku yaalmeesha loo yaqaan Tysons Corner oo kutaal gobolka Virginia.
Waxaa shirkaaskasoo qayb galay qaar ka mid ah jaalliyadda Soomaaliyeed ee deggan Mareeykanka. Wasiirku wuxuu warbixin faafaahsan ka bixiyayxaaladda iyo arrimaha ku saabsan Soomaaliya iyo DKG ee uu ka tirsan yahay.
Wasiirku waxaa uu si furfurnaan iyo kalsooni weyni ka muuqato uga hadlay arrimaha hadda ka jira Soomaliyaiyo doowrka DKG ka qaadaneyso.
Waxaanauu Wasiirku , Mudane Daahir Dayax si deggan uga jawaabay su’aalo fara badan ooqaarkood ay ka muuqatay faduul iyo far isku fiiq. Waxaa munaasabaddaas hadal taageero iyo dhiirrigelin leh kasoo jeediyay Ambassador Cali Xaaji Xaashi oo ka mid ah jaaliyaddahalkan ku nool.
Waxaa kale oo hadaldhaliil iyo eed ka muuqato ka soo jeediyay nin isagu u hadlayay mucaaradka oomagaciisa la yiraado Keenidiid Khaawe oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolkaVirginia.